Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Magnetic Holding System - Shiinaha Warshadda Haysashada Magnetic
Ynet Pilot Ladder Magnet waxaa loo sameeyay si loo badbaadiyo nolosha duuliyeyaasha badda iyada oo la siinayo dhibco barroosinka laga rogi karo ee jaranjarooyinka dhinaca markabka.
Soo jiidashadaan magnet-ka ah wuxuu soo qaadi karaa birta / birta ama walxaha birta ku jira dareeraha, budada ama hadhuudhka iyo / ama granules, sida soo jiidashada walxaha birta laga soo bilaabo qubeyska electroplating, kala soocda boodhka birta, burooyinka birta ah iyo faylasha birta laga soo saaray.
Wareejinta soojiidashada magnetka waxaa loogu talagalay soo jiidashada qaybaha birta ee walxaha kale. Way fududahay in hoose lagala xiriiro qaybaha birta ee birta ah, ka dibna kor loo qaado xarkaha si loo soo qaado qaybaha birta.
Soo qabashada soojiidashada birlabadka ah wuxuu soo jiidan karaa birta iyo jajabka birta sida boolal, firileyda, musmaarrada, iyo birta duugga ah ama waxyaabaha birta ka sameysan iyo birta ka soocan waxyaabaha kale.